Karazan-labera OEM ho an'ny vokatra jiro LED ho anao
1. Labels mifamatotra
Ny safidinao voalohany dia ny marika vokatra jiro maniry tianao indrindra miaraka amin'ny labels adhesive. Mamboarina mora foana miaraka amin'ny logo an'ny orinasanao io araka ny fomba itorianao azy io, ary tsy mitaky fepetra be dia be, midika izany fa hikarakara ireo takelaka adhesive ho an'ny vokatra marobe tianao harahina ianao.
2. Fanontana ny efijery
Ny safidy faharoa anao, izay tsy mitovy ihany amin'ny fantsom-pahalalana adhesive, dia ny fanaovana pirinty ny orinasan-kaompanao mivantana ao amin'ny efijery vokatra jiro LED tianao. Ity dia paikady momba ny marika mahomby raha tianao ny hanafatra anao ho lasa tena mirindra amin'ny maha-orinasa anao.
3. Fitaovana sokitra
Ny safidy fahatelo tianao hanampy anao hanamboarana ny jiro LED anao dia ny hahafahanao misintona ny laser logo misy anao amin'ny jiron'ny safidinao. Ity dia safidy iray ankafizin'ny safidy manokana indrindra ho an'ny ankamaroan'ny vokatra ao aminay, satria ny fakana sary laser dia mety amin'ny zotram-bolantsika manontolo ary ahafahanao mamela ny kalitaon'ny teknolojia anatiny hisaintsaina ny ivelany.
Tariby hitondrana, Arotsaha fanaovan-jiro ho an'ny zavamaniry anatiny, Uv Lamp For Plants, Jiro fitomboan'ny fambolena, Jiro mitombo, Jiro anatiny,